Ukucandwa komhlaba kweHortica
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: » Business Directory » Iinkonzo zoYilo » WO » Ukucandwa komhlaba kweHortica1
:: :: :: http://www.horticaplants.ae
Inombolo yelizwe:: 486200
Ukukwazi kwethu ukubonelela abathengi bethu ngenkonzo yokujonga imeko engundoqo, kutheni siza kuqhubeka nokuba lukhetho olukhethwe ngabathengi bethu: ukuqala kwizicwangciso zomqondo wokuqala ukuya kwimeko eyakhiweyo. Siyazingca ngokusebenzisa ngobuchule iinkqubo zokunkcenkceshela zamva nje, iindlela zokwakha kunye nokugqitywa kokuma komhlaba ukudala ubume obuzinzileyo kunye nelixesha.
Iqela lethu leengcali lenziwe ngabayili abazimiseleyo nabazimiseleyo, iinjineli, abayili bezakhiwo, imihlaba, abaphathi beeprojekthi kunye nabalimi bezolimo abazama ukwenza umahluko omuhle mihla le kwiprojekthi nganye. Sisoloko sityala imali kuqeqesho nophuhliso lwabasebenzi bethu, kuphando nophuhliso lweendlela zethu, kunye nophicotho zincwadi rhoqo lwentsebenzo yethu ukuya kwelona nqanaba liphezulu lamazwe.
Besidlala indima ekhokelayo ekubumbeni umhlaba ngokutyala izityalo ezifanelekileyo, iintyatyambo, imithi kunye neebhedi zengca ngokungenisa elizweni kunye nezityalo ezilungiselelwe amakhaya kunye nezityalo eDubai. Abasebenzi bethu abazinikeleyo baye bazakhela udumo lokufumana iinkcukacha, ukwaneliseka kwabathengi kunye nokuhlengahlengiswa okuvumayo. Abasebenzi bethu abanezakhono bayazi ukubaluleka kunye nexabiso lembonakalo yakho yomhlaba.
Yonke inkonzo efunekayo iyafumaneka kwaye yenziwa ngoochwephesha abaqeqeshiweyo kwishedyuli elawulwa ngononophelo ukuqinisekisa iziphumo ezilungileyo. Ukusuka enyangeni ukuya enyangeni kunye nexesha ukuya kwixesha, kwiingcali zethu ziyakwazi ukubona kwaye ziphendule nayiphi na imfuno ngokukhawuleza.
+ 97155322xxxx bonisa
Ibhaliswe kwi-20. Feb 2018
Nxibelelana nentengiso + 97155322xxxx
Khetha udidiindawo yokuhlala Amagumbi aqeshwayoAmakhaya okuhlala ApartmentsBusiness Directory Ababoneleli beenkonzo zeMali Abahambisi bokuPhucula iKhaya Iinkampani zokwakha Iinkonzo zoYiloIsiqondisi seArhente yeZindlu Iiarhente zentengiso
Ibhaliswe ngoFebruwari 20, 2018
DXB To RAK Road, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road Exit No. 86 Al Helio - Ajman
zonke iindidiindawo yokuhlalaAmakhaya okuhlalaBusiness DirectoryIsiqondisi seArhente yeZindlu